Qarax laga maqlay markab ku sugan xeebaha Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaQarax laga maqlay markab ku sugan xeebaha Puntland
June 27, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Markab dagaal oo ku sugan xeebaha Puntland. [Sawirka: Archive]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Qarax ayaa laga maqlay markab jooga xeebta Puntland shalay galab oo Isniin ahayd iyadoona la arkay qiiq ka soo baxaya markabka, sida ay ku warantay wakaalada wararka Reuters oo soo xiganaysa masuul katirsan Puntland.
“Waxaanu maqalnay qarax weyn iyo qiiq ka soo baxay markabka. Waxaan u malayn in markabku uu ahaa mid ajnabi,” ayuu yiri Cali Shire oo ah guddoomiyaha degmada Caluula ee Puntland.
Guddoomiyaha ayaa aaminsan in markabku uu ahaa mid dagaal maxaa yeelay labo markab oo dagaal oo ajnabi ah ayaa gacan ka geysanayay badbaadinta shaqaalaha markabka saarnaa.
Ma cadda weli haddii qaraxa uu keenay shil ama uu sababay weerar burcadbadeed. Sidoo kale ma cadda in markabku uu quusay qaraxa kadib.
June 17, 2017 Masuuliyiin katirsan dowladda Puntland oo soo gabagabeeyay socdaal qiimayn ah oo ay ku joogeen deegaanka Af urur
May 23, 2017 Burcadbadeeda Soomaaliya oo afduubtay dooni kalluumaysi oo Iran laga leeyahay si ay ugu ugaarsadaan maraakiibta ganacsi